Nzvimbo dzakanaka kumaodzanyemba kweSpain: Andalusia | Kufamba Nhau
Nzvimbo dzakanaka kumaodzanyemba kweSpain: Andalusia
Carmen Guillen | | Spain maguta
Andalusia inzvimbo yakakura muSpain. Iyi kona huru yekumaodzanyemba kwepeninsula inovanza zvishamiso zvechokwadi zvakakodzerwa kwete kwete chete kuona asiwo kugara nekugara mazviri. Kana iwe uchida kuziva kuti ndedzipi nzvimbo dzakanaka dzatakasarudzira ino chinyorwa kubva munharaunda huru iyi, gara nesu kuti unakirwe nechinyorwa ichi. Isu tinokuvimbisa iwe kuti iwe hausi kuzosiya iyi mitsara usati watanga kuda kuve mukati Andalusia pari zvino.
1 Chinhu chakanaka nezve Andalusia ...
2 Nzvimbo dzatinosarudza muAndalusia
Chinhu chakanaka nezve Andalusia ...
Andalusia, senge chero imwe Autonomous Nharaunda, kana senge chero imwe nzvimbo yepanyika, zvine hungwaru huwandu hwayo hwezvakanaka zvinhu, uyezve, zvakare zvimwe zvimwe zvinhu zvakaipa ... Zvisinei, tiri pano kuzokukoka kuAndalusia, saka kuti iwe unzwe kuda kushanyira iyo, kukurudzira iyi inonaka nzvimbo kumaodzanyemba kwenyika yedu.
Hauzive here kuti ndeapi mapoinzi anotsigira Andalusia? Zvakanaka, nyatsoteerera, nekuti pazasi isu tinongoratidzira mashoma eakawanda:
Mutsa uye kuva pedyo kwevagari vayo. MuAndalusia, kashoma kuti iwe uende kune mumwe munhu mumigwagwa yaro uye ivo vasingapindure nemutsa, padyo uye charisma. Kana isu maAndalusians tichizvikudza nechinhu chero chipi, ndechekuti isu tinosvikira kune avo vanozvikumbira.
Mamiriro ekunze akanaka anopfuura mwedzi mipfumbamwe pagore. Kunyangwe mune dzimwe nzvimbo dzeSpain zvinowanzodavirwa kuti iyo yekumaodzanyemba haimbotonhora kana kana iri pakati nepakati, hapana chekuona kanenge mumakore achangopfuura. Munzvimbo zhinji dzekumaodzanyemba, inosvika -2 kana -3 madhigirii pane mamwe mazuva echando, asi ichokwadi kuti iwo chaiwo uye chaiwo mazuva. Kana iwe uchida kunakidzwa nemamiriro ekunze akanaka, zuva uye yakanaka mamiriro ekunze mune zvese, iwe uchafarira iyo yekumaodzanyemba uye zvinoita senge inogamuchirwa kwazvo.
Sierra negungwa. Kana iwe uri mumwe weavo, seni, usingade kusarudza pakati pemahombekombe nemakomo nekuti ivo vanoafarira ese ari maviri, muAndalusia iwe uchawana zvese zvikumbiro. Nemazana emakiromita emhenderekedzo yegungwa uye makomo anoshamisa, unogona kutiza kubva kune imwe nzvimbo uchienda kune imwe munguva pfupi uye nepfupi.
Nzvimbo dzatinosarudza muAndalusia
Kusarudza gumi dzakanaka nzvimbo muAndalusia ibasa rakaoma, asi isu tichaedza nepatinogona napo kukurudzira akanakisa ezvakanakisa enharaunda inozvitonga:
Cabo de Gata Natural Park, muNíjar (Almería): Iyo inzvimbo yakanaka kune avo vanotsvaga kusangana nemasikirwo uye vanonakirwa nenguva dzekuvanzika.
Pomegranate: Hapana mubvunzo kuti rimwe remaguta akanaka kwazvo muAndalusia neSpain kazhinji. Ine runako, ine runako, ine gomo renzvimbo nenzvimbo yayo inozivikanwa yeSierra Nevada, uye kune rimwe divi, zvakare ine nzvimbo yegungwa.
Úbeda, muJaén: Guta maunowana makuru maRenaissance motifs mune dzakawanda zvivakwa zvaro kana chaunoda kufamba-famba mumaguta nekuwana zvakagadzirwa nevanhu zvakagadzirwa. Úbeda, yakaziviswa Cultural Heritage yeHumanity neUnesco muna Chikunguru 3, 2003.
Mónsul beach, muAlmería: Iri gungwa rakasarudzwa nevakawanda senzvimbo yepamusoro yegungwa muAndalusia.
Torcal de Antequera Natural Park, muMalaga: Mamiriro akasiyana anotaridzika seyakavezwa musamu pane echisikigo marongero.
Sierra de Hornachuelos Natural Park, muCórdoba: Nyanzvi dzakawanda dzinocherekedza mhuka dzinobva kumativi ese eSpain uye chikamu chenyika dzinouya kupaki iyi yepanyama vachitsvaga makondo nemagora matema makuru.
Seville: Guta rehunyanzvi, shuwa uye yakadzika tsika yeAndalusian tsika. Guta rine zvakawanda zvekuratidza nyika uye panogara paine menyu hombe yetsika nezororo zviitiko.
Conil de la Frontera, muCádiz: Munguva pfupi yapfuura, iri guta reCadiz rave nzvimbo yakasarudzwa nevechidiki kubva kumativi ese eSpain kumhemberero dzezhizha. Chinhu chakanakisa nezvesaiti iri pasina mubvunzo mahombekombe ayo akanaka muzhizha, anogara akazara nevanhu.
Sierras de Cazorla, Segura uye Las Villas Natural Park, muJaén: Inzvimbo inoshamisa yesango, mapopoma emvura, makomo uye nzizi uko kwatinoona huwandu hukuru hwemhuka nemhuka, zvikuru mhembwe uye dzinobereka.
Doñana National Park, muHuelva: Imwe yenzvimbo dzakanakisa muAndalusia neSpain. Kana iwe uchida kugara wakakomberedzwa nemasikirwo nemumatope, iyi ndiyo paki yako. Nzvimbo inoyevedza kunyanya kune vanoda mafoto vanogona kunakidzwa nekuvira kwezuva uye kuratidzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Spain maguta » Nzvimbo dzakanaka kumaodzanyemba kweSpain: Andalusia
Tropea, iyo dombo reItari
Shanyira Oslo, chii chekuona nekuita muguta guru reNorway I